Luule Viilma: siqu zokuphila, biography, izithombe, izincwadi
Luule Viilma idume udokotela Estonia nengokomoya. ubuntu wakhe igcwele izimfihlo eziningi ukuze asindise ukuphila kwakhe, wahlupheka nokufa eziyisithupha zokwelapha, kanye nombono wawo emhlabeni kumane indoda emangalisayo emgwaqweni. Ngemva kweminyaka eminingi odokotela bendabuko ukuphika ke ngenxa yezimfundiso parapsychological lapho lakhiwa inqubo elapha Luule Viilma (iminyaka yokuphila - 1950-2002). Washona ngo engozini yemoto eduze eTallinn. Lapha sizobe ukukhuluma okwengeziwe parapsychologist ezidumile udokotela ehlola imisebenzi abanamakhono ezidinga ukunakwa.
April 6, 1950 emkhayeni nokubafundisa babe Olga Yuhanasa eBurma Raya ngasedolobheni Jõgeva wazalwa Luule. Lapho ethola iziqu esikoleni esiphakeme. Ubuhlobo nonina obesekunzima kakhulu, yena njalo abantwana bami ukuthi sebezinikezele engajabule wakhe. Kwakuthinta zibekwe engqondweni kwentombazanyana, futhi kusukela ngaleso sikhathi kwaba wangabaza umzali yayo.
Esikhathini kusuka ngo-1968 kuya 1974, watadisha ngesikhathi uphiko lokuqeqeshela ezokwelapha of Tartu State University. Ngaleso sikhathi kwaba nyuvesi kuphela kuleli zwe. Ngemva kokuthweswa iziqu, wachitha iminyaka engu-18 khona Udokotela Wabesifazane. Futhi ngaleso sikhathi kwakunabazalwane abangu izifundo ezingu-15 parapsychology, okuyinto waphefumulela indlela yakhe siqu ezinkingeni zezempilo.
Lendawo udokotela Estonia Luule Viilma ukuziqeqesha ngo-1991. Kwathi nje ngemva esafunda izifundo parapsychology. Ngenxa yesimo sakhe sengqondo ekuphileni ishintshile kakhulu.
izinyanga ezintathu, wathola isipho sakhe clairvoyance, nakuba wayengahambisani ukusebenzisa leli gama. Ngenxa yokuhlangenwe nakho zayo kanye nolwazi emkhakheni parapsychology futhi imithi, bahlakulele Imfundiso yokuziphendukela kwemvelo ezingokomoya, ngaleso sikhathi kuboniswe ngokucacile ezincwadini zakhe eziningi.
Futhi le ndlela, ekwelapheni izifo futhi lisetshenziswa imithi herbal kanye isixazululi nkinga yehadiwe nezinsiza. izimfundiso zayo ayizange yamukelwe ngu nemithi evamile, kanye nozakwabo nabo wasebenza, ngakho-ke kwakudingeka angene abazimele, ukuze athuthukise uhlelo zabo yokwelashwa.
Indlela Yokwenza Viilma
Imfundiso kusekelwe umqondo oyinhloko: ngokuthethelela ngokwakho ngomqondo ebanzi izwi, kanye ilungelo ukwakhiwa imicabango yabo umuntu kumanje ukwazi ukuthola injabulo, ukuthula kanye nezempilo. Luule Viilma uye banyathelisa uchungechunge lwezincwadi lapho kabanzi ezichaza imicabango yakhe futhi imikhuba ezingokomoya. Bancika isipiliyoni yayo olunzulu emkhakheni wezokwelapha, parapsychology, futhi clairvoyance. Phakathi lezi zincwadi kungenziwa ngokuthi ezifana "amathuba zethu ezifihliwe noma ungaphumelela kanjani ekuphileni," "umuntu MOD, noma isithunzi wokuphila", "Cha okubi ngokwayo", "umthombo Khanyisa ekuphileni."
Ngokusho Luule Viilma, yonke into ekuphileni kufanele wabhekana indoda, futhi ababi nabahle, kunesizathu - ke unenjongo ekhethekile. Okungukuthi, usebenzisa abampofu, kuhlanganise nokugula, umuntu efunda noma yini, lokho ekudingayo kakhulu.
Kodwa kungase kwenzeke hhayi kuphela ngokuhlupheka njengoba Viilma uthi, kodwa ngenye indlela - ngokusebenzisa ukubathethelela ngeqiniso uqobo. Ubani bakwenze izimfundiso zalo, ukuphulukisa, ukuthuthukisa isimo sabo futhi ukuphila. Abafundi uzophawula ukuthi incwadi, nakuba ezibhalwe ngolimi kuyinkimbinkimbi futhi ngezinye izikhathi kudida ukuqonda, eqinisweni, Sinesithakazelo esikhulu futhi lineqiniso buqinile. Bavula indlela kuye, wafundisa ukuqonda umphefumulo wakhe futhi aphilise.
Ukuthola ulwazi ezincwadini mayelana imfundiso yalo kunika litfuba bahlole izwe futhi kusibuyisela namaqiniso eBhayibheli. Ngemva kwabo, kukhona isifiso sokuphila futhi ayazise yini, - ngakho ukukusho mayelana izincwadi zakhe abafundi sibonge.
Njengoba udokotela ebachazela okuvela zesifo?
udokotela Estonia Luule Viilma ngokuhunyushwa nomqondo isifo nokuhlupheka ngokomzimba hhayi kusuka imithi yendabuko, futhi ezisekelwe olwazini parapsychology. isimo esinjalo, njengoba umkakhe asho: kwenzeka uma amandla engemihle idlula umugqa othile ezibucayi. Khona-ke isimiso uyaphuma ukuzimelela kanye ewela ukugula.
Le ndoda aqale ukuhlushwa kuze kube sezingeni lokuba kungukuphula ngobunye nezwe elizungezile. Konke has a imvelo zamazwe amabili - okuhle nokubi, omnyama nomhlophe. Ngokusho ithiyori yakhe, efana edonsela like. Malice okungadonsela intukuthelo kuphela, kodwa uthando - uthando. Lapho amaqembu amabili ngenxa ezimbi noma bathola ungcono noma kukubi kakhulu, esimweni uma ungenawo isifundo.
ubuhlungu obungokomzimba unolwazi ngalokho kuyadingeka ukuze ulungise iphutha, futhi uma amasignali umuntu umzimba wakho indiva, yena uyagula. Ngakho, ngenxa yobuhlungu benhliziyo kuba uqala nje zibe ngokomzimba.
Wayengumngane labalobi enkulu nothisha esingokomoya sabangu-Estonia. Encwadini yakhe ethi uhlola ubudlelwano phakathi isimo sengqondo zethu, imicabango kanye nempilo yethu. imibhalo yakhe waba kahle kakhulu, hhayi nje kuphela ekhaya, e-Estonia, kodwa futhi Russia, eLatvia, eLithuania futhi Finland. Bonke sasimunye ngaphansi kwegama ezivamile "Ukufundisa sokusinda" kuzo wasebenza eziningi Luule Viilma. Incwadi enesihloko esithi "Forgive Me" yatha- bangempela ngesikhathi sakhe.
Viilma ukholelwa ngokuqinile ukuthi ngamunye wethu angasho ube udokotela yena. Ngaphezu lokubhala, wahlala, futhi lokho kwangenza amaseshini yangasese kanye izinkulumo eMoscow Riga, kanye nakwamanye amadolobha.
Ngakho, ukuze abantu bezama ekucabangayo Luule Viilma. Incwadi ethi "ukukhanya yemvelo," "Ngaphandle okubi ngokwayo", "umthombo eliqhakazile uthando", "Ubuhlungu enhliziyweni yakho", "ngokuhambisana", "Ukuthethelela kuyisici bangempela futhi ngengqondo '," Isayensi Kwalo "," Ungumthombo Wokuphila' "Ukuphila kuqala ngento ethile ngaphakathi kuwe", "Ukuqala iduna nensikazi", "Ukuqonda ulimi ukucindezeleka" babé athengisa kakhulu. Sekuyisikhathi eside akekho oxhumana naye, kodwa imisebenzi eminingi ingokomoya abanamakhono baphile noma kunjalo, zibonakalisa ukukhanya imicabango yakhe futhi umbono nohlonze emhlabeni.
Zonke izincwadi zakhe zihlukaniswe, isibonelo, ezigabeni ezifana ingokomoya, self-ngcono, ukwelashwa kwengqondo kanye nokweluleka, imithi ehlukile futhi impilo.
Uma kungxoxo Luule ake ukushelela ukuthi ngiwufinyelela konke ekudingayo - it kwakuzwakala la mazwi 2001. Mhlawumbe kwakuyisikhathi sokuboniswa wakhe siyisinqumo esinzima kunazo zonke. Ngonyaka olandelayo, ukuthi abashone engozini yemoto. Viilma bebuyela emotweni nomyeni wakhe ekhaya ukuze uthole edolobheni lakubo awuzange kakhulu, kodwa ngokushesha kokuthatha off maqondana imoto akazange ashiye amathuba okusinda.
Ngo-January 2002, Luule Viilma nezibi, kodwa lokhu nje ngenyanga wayekade isithangami sokuxoxa ku Riga, futhi akafuni ukuba ukukhansela ngenxa yokugula kwakhe. Wazizwa egula kakhulu futhi impilo yakhe buthaka, kodwa naphezu kwale mizamo, futhi yena nomyeni wakhe bathuthela esuka eTallinn.
Le ngozi yenzeke emgwaqeni omkhulu Riga-Tallinn. Endleleni eya ebusuku esibhedlela omunye ngoJanuwari washona eneminyaka engu-eminyakeni engu-52. incwadi yokuvalelisa wakhe, lapho yathandaza imicabango yakhe kwalabo ababazi eyayilaye bakhe endleleni, futhi ngokuvamile ukuze bonke abantu, yafundelwa bonke ababekhona emngcwabeni wakhe. Kungakhathaliseki ukuthi kwakubaluleke kangakanani Amazing, kodwa umyalezo lalotshwa umngane wakhe, lo ngemilingo ngemva engozini yemoto. Imininingwane ngandlela-thile ngasibuyisela ngokuyisimangaliso ukwazi ngoMeyi Vyalyataga Luule kwabafileyo ngosuku lwesithathu ngemva kokufa kwakhe.
Wakwazi ubambe seminar, okuyinto eyaba, kwacaca ukuthi, elokugcina ekuphileni kwakhe, futhi kwase kuyisikhathi sokuthi abuyele emuva ekhaya. Kodwa ngaphambi kokuba ahambe nomyeni wakhe baya e-Estonia, Riga intombi yakho, esho amazwi alandelayo: "Awu, ngizohamba ukuba sife." Kwathi nabatjhidela Tallinn, ne ezayo kwindlela imoto landizela futhi cishe iphahlazeka ukungqubuzana bukhoma nentaba emotweni, lapho kwakukhona Luule nomyeni wakhe. Wazama londoloza, kodwa yokusiza umuntu ukuba aphefumule ayimlethelanga umphumela. Emngcwabeni ngangisanda ifundelwe kakhulu incwadi yokuvalelisa.
Luule Viilma: uthando ukuphila
Ngo Luule nomyeni wakhe Arvo Viilma nginamadodakazi amabili - Virge futhi Vilja. Eyokuqala wazalwa ngo-1972, kanti eyesibili - eminyakeni emithathu. Umlando uthando abashadayo esizayo uqalile e-University of Tartu ngo-1969, lapho bobabili abaqeqeshiwe: yena - ku Academy Agricultural, futhi yena - the Faculty of Medicine. On busebenze ikakhulu wafunda abafana, futhi kanye banquma ushayele imisebenzi umfundi amantombazane kusuka empilweni: ngale ndlela futhi wathatha umhlangano wabo kwesibhamu.
Julayi 10, 1971 bashada. Ngemva konyaka iziqu, waqala ukufunda internship. Kamuva Luule futhi Arvo babé bukhoma Kehna ngomzana, e Rapla wesifunda. Useke wasebenza emtholampilo Rapla nomyeni wakhe epulazini. Kwadingeka ngisebenze eziningi, ngezinye izikhathi Luule zonke wayesebenza amahora angu-36 e amashifu amabili. Ngo-1983 banquma ukuthuthela, futhi kusukela ngaleso sikhathi baqala ukuhlala nokusebenza Haapsalu. Isibhedlela Luule wazizwa becindezelwa ngokwengqondo, ngoba iphathwa ngokwehlukile kunamanye odokotela. Abantu abaningi akakuthandanga lokho, futhi kwadingeka ukuba ashiye izindonga izibhedlela ngo-1993.
Bese waqala umkhuba wakhe ngasese, futhi indawo yomsebenzi abangu baphume isikhala enkulisa entsha. Isikhathi e Luule kwakukuncane, nomyeni wakhe baqala ukuba amsize. Kwaphela iminyaka emibili basebenza esikhungweni wezokwelapha, elise 15 km kusuka Haapsalu. Wathatha njengoba udokotela wezifo zabesifazane futhi wanikeza amasevisi kuphela kokukhuluma. Indodakazi yakhe Villa ukhumbula ukuthi unina ayikwazanga ukwenza ngenye indlela, futhi akusho ukusiza abantu. Luule Viilma ukhathele kakhulu ezinsukwini eside esebenza khona, kodwa lokhu akuzange kuwumise ukusiza abantu abadinga iseluleko sakhe. Njengoba kuveziwe yi Villa, kwaba umsebenzi wakhe, futhi wafisa ngenhliziyo yami yonke ukukuthwala ngokusebenzisa ukuphila. Wakhe ukhathele into eyodwa kuphela: lapho abantu abazange ufuna ukushintsha ngokwabo, kodwa ukumane kususwe zokuphila ezinzima izimo nezifo.
Umyeni Arvo Viilma manje uphokophele inkampani Prema LTD, waziphatha ukudayiswa amalungelo ncwadi Luule Viilmy.
Njengoba yena wathi, Viilma wazizwa kulo lonke isikhathi kwakuthandeka emandleni aphakeme, okwamsiza empilweni, futhi njalo wanikela isibindi unembeza bevuswa. ukuphila kwakhe esiye sakuthinta ngayo enye inkathi emlandweni lapho uNkulunkulu engakholwanga futhi ukungakholelwa kuNkulunkulu lanqoba yonke indawo, kodwa nakubabona lokhu. Naphezu kwakho konke, waba khona njalo ikholwa. Futhi uma othile delela uNkulunkulu, imibuzo khona kwakhe, wathola amathempelana indoda Defiler.
Ngokusho kwakhe, imiphumela yokwelashwa uzoqhubeka kuphela uma kwenzeka ukuthi umuntu empeleni waqonda imbangela yokugula kwakhe. Kodwa lokhu kudinga ulwazi, futhi ngangokunokwenzeka ukuqonda yenkinga ukujula. Kwaba nombono lokhu kwaba Luule Viilma. izincwadi zesayensi ezabhalwa yisazi wakhe, waba kuveza yokuqonda yayo izinkinga lwesintu futhi befundiswa, ogxile indlela yokuthethelela yokuzibona nabanye.
Wayekholelwa emhlabeni, konke kubalulekile, konke okukulo, kodwa kwakuyiphupho ukhokhele indima enkulu, futhi izwi - kuba umqondo ofanayo, kodwa kuphela ezingeni ngokomzimba. Ngokusekelwe kulokhu izimfundiso zikaKristu, wasifunda kuzo ukuthi nakanjani kudingeka ukuba limthethelele futhi bathande, ukuba indoda sijabule ngempela.
Luule Viilma: "The Big Book of Health"
Lokhu-encyclopedia anemidwebo, ohlanganisa ngokuningiliziwe awusizo nemibono we uthisha omkhulu. idatha theory eyatholakala kusukela kule ncwadi ziyokusiza ukuba uqonde ukuthi yini ezempilo ukuthi wawusho noma esinye isifo sokuphazamiseka zisesimweni yakhe. Lapha-ke kubhekwe zombili lezi zici ngokwengqondo nangokomzimba yalesi mkhakha kanye nobuntu e ubuhlobo babo obuseduze. Kodwa uma sicabangela ncwadi ngomqondo obanzi, kumayelana uthando, amandla okumsulwa kakhulu futhi ephulukisa ukuthi ukhona. Kuyinto kuphela amandla akhululayo kahle endaweni yonke futhi unika ayesanda kuluthola inkululeko.
Kususelwa iseluleko esinikezwe encyclopedia, ungazama ukuqonda isimo sabo, ukuthuthukisa kokubili zempilo engokwengqondo nengokomzimba. Qonda futhi, yisiphi isizathu okuyisona kuba izifo zakho noma labo abaphethwe ngendlela efanayo.
Louis Louis Zamperini: Biography
Indlela ukufaka isimangalo ukunxeshezelwa umonakalo okungezona yezimali
Ifomu nephephile zokuthutha: imicabango yabantu zabantu kanye nemiphumela kwezibalo
Uhlelo lokusetshenziswa kwemali yasekhaya: kwamandla ethu kungenzeka?